Forum serasera malagasy VAOVAO MATV 11 FEVRIER 2012 - Dinika forum.serasera.org
VAOVAO MATV 11 FEVRIER 2012
Fitohizan'ny hafatra : VAOVAO MATV 11 FEVRIER 2012
rijadolly - 12/02/2012 01:44
Nitombo hery ka lasa rivodoza i "Giovanna". Ao ao amin'ny ranomasimbe indiana moa no:misy azy ka mitondra rivotra mahatratra 165km/ora any amin'ny faritra manakaiky ny foibeny.
rijadolly - 12/02/2012 01:45
Ho an'ny Me Hanitra Razafimanantsoa, dia tetika entina hampirisihana ny ankolafy Ravalomanana hisintaka amin'ny tondrozotra ny fisavana tamin'ny fomba mahery vaika sy tsy ara-dalàna ny tranon'i Tojo Ravalomanana.
rijadolly - 12/02/2012 01:46
Ny 29 febroary ho avy izao no fe-potoana nomen'ny troikan'ny SADC hamoahana ny lalàna mikasika ny famotsoran-keloka. Mampanahy ny rehetra anefa ny tsy hahatratrarana io daty io. Mbola tsy hisy mantsy ny fivoriana tsy ara-potoanan'ny parlemanta hanapahana izany.
rijadolly - 12/02/2012 01:47
Noho ny fahatsapany fa mitarika adi-hevitra samihafa ny andininy faha-20 amin'ny tondrozotra mikasika indridnra ny fodian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, dia nandroso soso-kevitra amin'ny tokony hisian'ny dika tokana ny antoko Ampela Manao Politika.
rijadolly - 12/02/2012 01:48
Anisan'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny mpitsara taorian'ny fihaonambe nataony ny tokony tsy hitsabahan'ny mpanao politika amin'ny raharaham-pitsarana. Raha nanontaniana ny heviny momba izay ny jeneraly Desiré Philippe Ramakavelo dia nilaza fa fanapahan-kevitra tsara tokoa izay.
rijadolly - 12/02/2012 01:49
Ho an'ny pasitera Tsarahame Edouard avy amin'ny ankolafy Zafy Albert indray dia midika ny fanambaran'ny mpitsara omaly ireny fa nisy ny baiko nidina nandritra ny fitsarana raharaha samihafa. Everiny fa anisan'izany ny raharaha Antanimena izay nahatafiditra azy tany am-ponja.
rijadolly - 12/02/2012 01:50
Nitsingerina tamin'ity androany ity ny faha 37 taona nahafatesan'ny kolonely Richard Ratsimandrava. Nambaran'ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena fa atsahatra ny fanadihadiana mikasika ity raharaha famonoana ny filoham-panjakana tamin'izany ity.
rijadolly - 12/02/2012 01:51
Ny 10 febroary no mankalaza ny fetin'ny diplomaty ny rosianina maneran-tany ka isan'ny nankalaza izany isika teto Madagasikara.Tetsy amin'ny masoivoho rosianina tetsy Ivandry no nanaovana izany omaly. Hetsika ara-kolotsaina maro isan-karazany no nentina nanamarihana izany.
rijadolly - 12/02/2012 01:52
Nifarana omaly hariva tetsy amin'ny Antenimieran'ny varotra sy ny indostria ny fiofanana mikasika ny resaka fanenalenanana. Nandritry izay no nahafantarana fa hitsangana amin'ny faran'ny volana aprily ny ny Â« Centre d'Arbitrage et de Méditaion de Madagascar Â».
rijadolly - 12/02/2012 03:16
Ny tsy fisian'ny ny toe-tsain'ny fandrarahana no antony iray mahatonga ny fahantrana eto amintsika raha ny voalazan'andriamatoa Hagasata Rakotoson, filohan'ny ny Jeunes Patronat de Madagascar.
rijadolly - 12/02/2012 03:17
Notanterahana androany tao amin'ny SEG Soarano ny fisarihana voalohan'ny lalao Sms OJS izay mety hazahoan'ireo mpandray anjara tsara vintana, villa iray antsoina hoe JJ. Mpilalao 7 no nosarihana androany ary loka samihafa no ho zaraina ho azy ireo.
rijadolly - 12/02/2012 03:19
Anisany voafaritra ao anatin'ny sori-dalana ny fametrahana ny birao ifandraisana amin'ny SADC eto Madagasikara. Araka ny nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny, Pierrot Rajaonarivelo dia efa hiasa ary hanana ny trano iasany manokana tsy ho ella izany birao izany.
Page rendered in 16.6843 seconds